DHEGEYSO: Xisbiga cunsuriga ah oo marmarsiinyo cajiib ah u helay arrin saamayn doonta Soomaalida | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka DHEGEYSO: Xisbiga cunsuriga ah oo marmarsiinyo cajiib ah u helay arrin saamayn...
DHEGEYSO: Xisbiga cunsuriga ah oo marmarsiinyo cajiib ah u helay arrin saamayn doonta Soomaalida
(Sölvesborg) 24 Sebt 2019 – Hoggaanka Golaha Degaanka ee degmada Sölvesborg ayaa maanta go’aansanaya in ay maktabadaha ka joojiyaan soo iibsiga buugaagta afafka hooyo ku qoran ee ardayda aan asal ahaan dalkan kasoo jeedin.
Dad badan ayaa arrintan dhaleeceeyay iyadoo madaxa laanta dhaqanka ee degmada, Sofia Lenninger ay rumaysan tahay in arrintan uu si ula kac ah dabada uga riixayo xisbiga soo galooti diidka ah ee SD, kaasoo doonaya inuu tijaabiyo xadka waxa uu sharcigu ogol yahay iyo waxaanu ogolayn.
Hindisahan oo ay isla wadaan xisbiyada SD, Moderaterna, Kristdemokraterma iyo xisbiga maxalliga ah ee SoLpartiet oo maanta la hor gaynayo maamulka hoggaanka degmada Sölvesborg ayuu ujeedkiisu yahay in la biiriyo lacagta buugaagtan ku baxaysa sida ay qabto guddoomiyaha degmada Sölvesborg, Louise Erixon (SD) oo aaminsan in aan buugaagtan loo baahnayn.
”Ardayda qaarkood kuma hadli karaan luuqadooda hooyo ama maba doonayaan iney ku hadlaan. Sidaa darteed, waa xilkasnimo la’aan in la maalgeliyo buugaag iskafaallaha ku busoobaya, marka waxaannu albaabbada u furnay sidii aannu ku tijaabin lahayn fikirka in maktabaduhu ku qiimeeyaan howlahooda baahida jirta,” ayay tiri.
Saynab Maxamed Cusmaan waxay sannadihii ugu dambeeyey ku dhaqnayd magaalada Sölvesborg. Iyada oo kaalin xooggan ka qaadanaysay howlaha arrimmaha bulshada.
Waxay horay guddoomiye uga noqotay, iminkana ka tahay guddoomiye ku xigeen ururka is dhex galka Soomaalida ee degmada Sölvesborg, waxay sidoo ku shaqeeysaa barenimo, iyadoona afka hooyo ka dhigtaa qaar ka mid ah dugsiyada degmada.
Saynab Maxamed Cusmaan ayaa aaminsan i fikirkani uu saameeyn ballaaran oo aan wanaagsanayn ku yeelan doono ardayda iyo macallimmiinta dhigta afka hooyo intaba.
”Waa caqabad in buugaagta afka hooyo laga joojiyo maktabadaha degmada,” ayay tiri Saynab.
Previous articleDF Somalia & Axmed Madoobe oo loo kala dab qaadayo & caleemo saarkii oo dib u dhacay!
Next articleDHEGEYSO: Dacwad ay eeganayaan kooxaha cunsuriga ah oo Sweden ka furantay + Sababta & Warar kale